Amazia - Wikipedia
I Amazia na Amaziasa dia mpanjakan' i Jodà nandimby an' i Jôasy (na Jôasa) rainy ary zanak' ity mpanjaka ity tamin' i Jôadana. Nanapaka an' i Jodà nandritra ny 29 taona izy tamin' ny fiantombohan' ny taonjato faha-8 tal. J.K.
Atao hoe אֲמַצְיָהוּ /ʾAmaʦyāhû ny anarany amin' ny teny hebreo fa ᾿Αμεσσίας / Amessias na ᾿Αμασίας / Amasias amin' ny teny grika ary Amasias amin' ny teny latina. Io anarana hebreo אֲמַצְיָהוּ io dia midika hoe "ny herin' i Iahveh" na "ampaharezin' i Iahveh" na "mahery i Iahveh".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazia&oldid=1042033"